200W LED Floodlight - တရုတ် Faceled နည်းပညာတက္ကသိုလ်မှလက်ကား
R & D ကိုစွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်
LED Linear အမြင့်ဂလားပင်လယ်အော်အလင်း
LED Linear အလင်း
LED ကို Track အလင်း
ETL ကို LED Shoebox အလင်းများ
ETL ကို LED က Wall Pack ကို
strip Retrofit & Troffer ပြန်လည်
ul LED Retrofit ပစ္စည်းများ
ul / DLC LED ကို Down Light က
ul / DLC ကို LED Panel ကိုအလင်း
OEM & နှစ်ဖွဲ့
LED PL LAMP ကို
150lm / ပန်းကန်ပြားပျံ LED ကိုအမြင့်ဂလားပင်လယ်အော် w
150W LED ကိုဥမင်လိုဏ်ခေါင်းအလငျး
100W / 150W / 200W / 400W LED ကိုဥမင်လိုဏ်ခေါင်းအလင်းရောင်
300W အမြင့်ဂလားပင်လယ်အော်နဲ့ LED အလင်း
60W / 100W ပန်းကန်ပြားပျံအမြင့်ဂလားပင်လယ်အော်အလင်း
70w / 100w / 150w / 200w ပန်းကန်ပြားပျံအမြင့်ဂလားပင်လယ်အော်အလင်း LED
150W / 200W / 250W ပန်းကန်ပြားပျံအမြင့်ဂလားပင်လယ်အော်အလင်း
150W LED ကိုအမြင့်ဂလားပင်လယ်အော်
LED အမြင့်ဂလားပင်လယ်အော် - 100w
250W LED ကိုအမြင့်ဂလားပင်လယ်အော်
200W LED ကိုအမြင့်ဂလားပင်လယ်အော်
က Round LED panel ကို KN-DL18-10-S က
အလင်းအား flux: 100 ကို LM / W ကို
အိုင်ပီခဲ့သည် Rating: IP65
လက်မှတ်များ: အီး, ROHS, ul, etc
ငွေပေးချေမှုရမည့် Term :: TT & LC
အာမခံ:5နှစ်အာမခံ
& middot; အရည်အသွေးအချစ်ပ်များနှင့်ဆင်ခြင်တုံတရား quadric optical အလင်းဖြန့်ဖြူးနှင့်အတူသိပ္ပံနည်းကျဒီဇိုင်းကတည်ငြိမ်တဲ့အသုံးပွုဖို့လုံခြုံပြီးတောက်ပထံမှအခမဲ့ပါစေ။
& middot; တိုက်နယ်ဒီဇိုင်း: ကျယ်ပြန့်ဗို့အကွာအဝေး: 85-265v နှင့်ကျယ်ပြန့်အကြိမ်ရေ။ မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ပါဝါအချက်တစ်ချက်။
& middot; Long ကသက်တမ်း: နိမ့်ကာဗွန်ရေလွှမ်းမိုးအလင်းနိမ့်အလင်းယိုယွင်းခြင်းနှင့်ရှည်လျားသက်တမ်းနှင့်တကွ, အဆင့်မြင့်အပူစီမံခန့်ခွဲမှုနည်းပညာကိုချမှတ်ဦးဆောင်။
& middot; တစ်ကြော့နှင့်စုံစုံမျက်နှာပြင်အသွင်အပြင်နှင့်အတူအရည်အသွေးမြင့်လူမီနီယံအလွိုင်းထည်အသုံးပြုခြင်း။
& middot; အရည်အသွေးမြင့်မားအီလက်ထရောနစ်အစိတ်အပိုင်းများနှင့်အစိတ်အပိုင်းများကိုအသုံးချဖို့, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးဆောင်သောရေလွှမ်းမိုးအလင်း၏အမှန်တကယ်အာဏာကိုအချက် 95% မှရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။
& middot; အီး & RoHS အတည်ပြုခဲ့သည်။
& middot; အရောင်းဝန်ဆောင်မှုပြီးနောက် Excellence ။ ကျနော်တို့ကိုဦးဆောင်ရေလွှမ်းမိုးအလင်းများအတွက်2နှစ်အာမခံပေး။
တစ်ဦးသက်ဆိုင်တဲ့ကင်ဆီမီးခွက် panel ကိုတိုက်ရိုက်တပ်ဆင်ခြင်းများအတွက်အထူး drive ကို power supply နှင့်အတူပရိဘောဂအစုံအလင် 1.
စွမ်းအင်ကျော်ကို 60% ကို Save လုပ်ရန် 2. တူညီသောရောင်ခြည်ကဲ့သို့တစ်ဦး FL ပြွန်၏% စွမ်းအင်ကို than20 သမားရိုးကျပြွန်အလင်း OD နှင့်ပိုပြီး
3. တာရှည်ခံ, ထိတ်လန်နှင့်တုန်ခါမှုသက်သေအထောက်အထား; ဘေးကင်းလုံခြုံမအဆိပ်အတောက်ပြဒါးပတ်ဝန်းကျင်နဲ့သဟဇာတနှင့် contians
4. LED လမ်းဆုံအပူချိန်သေချာစေရန်အဆိုပါ optimized အပူနစ်ဒီဇိုင်း below60 ဒီဂရီဖြစ်ပါသည်
5. သူတို့ဟာ manydifferent အသုံးပြုသူ၏လိုအပ်ချက်ပြည့်မီဖို့မြင့်မားသော CRI နှင့်ကွဲပြားခြားနားအရောင်အပူချိန်များ
ပျော့ပျောင်း, Anti-တောက်ပနှင့်ထိရောက်သောပတ်ဝန်းကျင်များကိုဒီဇိုင်း 6.
မြင့်မားသောရောင်ခြည်ကို အသုံးပြု. 7. Lighting အလင်းအရင်းအမြစ်နှင့်အထူးဆန့်ကျင်တောက်ပဒီဇိုင်းကို LED
8. ထုတ်ကုန်အသက်တာ၏အကြောင်း 35,000-50,000 နာရီ
ထိုကဲ့သို့သောစက်ရုံအလုပ်ရုံ, အားကစားကွင်း, ဆိပ်ခံတံတား, ကြော်ငြာပျဉ်ပြား, ပန်းခြံများနှင့်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းထဲမှာရှိသကဲ့သို့မိုးလုံလေလုံနှင့်ပြင်ပတွင်သောနေရာများအတွက်အသုံးပြုရနိုင်သလား
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် MIC နှင့်အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်, floodlights ဦးဆောင်တဲ့, 400w floodlight ဦးဆောင်တဲ့ 320w ရေလွှမ်းမိုးအလင်းကိုဦးဆောင်, 280w ရေလွှမ်းမိုးအလင်းအိမ်ဦးဆောင်တဲ့, 160w ရေလွှမ်းမိုးအလင်းကိုဦးဆောင်, 220w ရေလွှမ်းမိုးအလင်းကိုဦးဆောင်, 150w ရေလွှမ်းမိုးအလင်းအိမ်ဦးဆောင်စသည်တို့ကိုမြင့်မားအာဏာကိုတီထွင်ခဲ့သည်
အဘယ်ကြောင့် MIC တွင်အလင်းအမှောင်ကနေဝယ်ယူ?
1. ကျွန်တော်တို့မြင့်မားတဲ့အာဏာကို COB ၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်သူ, ထိုကဲ့သို့သောဦးဆောင်တဲ့ floodlight အဖြစ်အလင်းအိမ်ဦးဆောင်တဲ့ streetlights ဦးဆောင်သည့်မြင့်မားပင်လယ်အော်အလင်းကိုဦးဆောင်, အသွားအလာအလင်းကိုဦးဆောင်, panel ကအလင်းကိုဦးဆောင်လျက်ရှိသည်။ MIC တွင်လွတ်လပ်စွာကျွန်တော်တို့ရဲ့လငျးအိမျသာစတော့ရှယ်ယာထိပ်တန်းအရည်အသွေးပစ္စည်းများစမ်းသပ်ရန်။ အားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့လငျးအိမျမှာ2မှ3နှစ်အထိအာမခံရှိသည်။
2. သင်က Alibaba တခုတခုအပေါ်မှာ off-ကမ်းထောက်ပံ့နေတဲ့အလားတူပစ္စည်းကိုစျေးသက်သက်သာသာရှာတွေ့ပေမယ်စာပို့ခနှောင့်နှေးဆင်ခြင်ဖြစ်နိုင်သောအကောက်ခွန်စွဲချက်အလွန်ဖြစ်နိုင်သော inauthentic LED chip ကို, တွေ့နေရတယ်ယာဉ်မောင်းများနှင့်ဒေသခံတစ်ဦးအာမခံ၏မရှိခြင်းနှင့်ကယ့်ညျကယျတငျခွငျးအရိပ်မိလျှော့စျေးဖြစ်ပါတယ်လိမ့်မည်။
3. LEDs တစ်သက်တာထုတ်ကုန်များမှာနှင့်ပုံမှန်အသုံးပြုမှုနှင့်အတူယုံကြည်စိတ်ချရသောဝန်ဆောင်မှုအနည်းဆုံးဆယ်စုနှစ်တစ်ခုမှနှိုင်းယှဉ်ထားသည်သော 50,000 နာရီ, ကြာရှည်သင့်သည်။ ကြာရှည်နှင့်စိတ်ပျက်မအရည်အသွေးညံ့ဖျင်း LEDs ချစ်ပ် / drivers တွေကိုပေါ်တွင်သင်၏ငွေကြေးနှင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှုမဖြုန်းတီးပါနဲ့။ ကျနော်တို့ဟာအလွန်ကောင်းသောစျေးနှုန်းမှာသငျသညျအကောင်းတစ်ဦးရဲ့အရည်အသွေးထုတ်ကုန်ရောက်စေဖို့သုတေသနလုပ်ငန်းတွေအများကြီးပွုပါပွီ။
4. ကျွန်တော်စက်မှုလုပ်ငန်းဦးဆောင်စျေးနှုန်းများမှာသင်တစ်ဦးလျောက်ပတ်သောအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်ကိုရောက်စေဖို့သူကြားခံထွက်ခုတ်ဖြတ်ကြပြီ။ အနှစ်အာမခံ to3 ကျွန်တော်တို့ရဲ့2ငါတို့သည်ငါတို့၏အိမ်စာပွုပါပွီကြောင်းကြေညာချက်ဖြစ်ပါတယ်။
5.Finally - လျှပ်စစ်ဘေးကင်းလုံခြုံမှု။ MIC တွင်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းအီးယူစံချိန်စံညွှန်းဖို့အားလုံးကိုထုတ်ကုန်စမ်းသပ်။ အကြှနျုပျတို့သညျကအိမျတျော၌နောက်တဖန်စမျးသပျဖြစ်ပါတယ်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းရောင်းချမီ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်များအားလုံးသည်ကျနော်တို့ထုတ်ကုန်များအတွက်သက်ဆိုင်ရာ EMC စမ်းသပ် data ကိုကိုင်ဆိုလိုတာက ac ကို tick အခြေအနေ, ရှိသည်။ သငျသညျသူတို့လျှပ်စစ်အန္တရာယ်ကင်းဖြစ်ကြသည်နြိုဒီတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ 240V ထုတ်ကုန်များအတွက် SAA ခွင့်ပြုချက်ရဖို့စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာပိုက်ဆံဖြုန်းနေကြတယ်။
ယခင်: ရေစိုခံ LED ကိုအမြင့်ဂလားပင်လယ်အော်အလင်း -100W
နောက်တစ်ခု: 150W / 200W / 250W ပန်းကန်ပြားပျံအမြင့်ဂလားပင်လယ်အော်အလင်း
200W (2pcs * 100W)